people Nepal » कुन नेता कहाँबाट मतदान गर्दै ? कुन नेता कहाँबाट मतदान गर्दै ? – people Nepal
Posted on December 7, 2017 by Durga Panta
काठमाडौँ, २१ मंसिर । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाअन्तर्गत बिहीबार हुन गइरहेको दोस्रो चरण निर्वाचनमा प्रमुख दलका सबैजसो शीर्ष नेताले मतदान गर्दै छन्। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र्रराय यादव, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मले दोस्रो चरणमा मतदान गर्दै छन्।
एमाले नेता माधव नेपालले गौर नगरपालिका- २ स्थित रामजानकी कन्या प्राथमिक विद्यालय भवनमा मतदान गर्दैछन्। नेता नेपालले पनि आफूले आफैँलाई मतदान गर्न पाउने छैनन्। उनी काठमाडौं २ बाट प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका- ८ को त्रिभुवन माविमा मतदान गर्दैछन्। अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावालीले दाङको तुलसीपुर- १७ स्थित दीपेन्द्र मावि मानपुरबाट मतदान गर्नेछन्।